🥇 Akaụntụ na ahia
Ikwu oke: 4.9. Onu ogugu nke otu: 864
Akaụntụ na ahia
Video nke aza ajụjụ na ahia
Dezie ajụjụ gbasara azụmaahịa
Enweela m azụmahịa m ma chee otu nnukwu nsogbu nke ijikwa ọnụahịa azụmaahịa. Nchịkọta nhazi njikwa na-ewe oge na ume dị ukwuu. Ọzọkwa, ihe na-akpata njehie ụmụ mmadụ na-eduga na nfupụ arụpụtaghị ihe na mbelata nke ego. N'ezie, anụwo m banyere sistemụ nke na-akwado ịkwakọba ego na azụmaahịa. Agbanyeghị, ịhọrọ otu bụ ọrụ siri ike ebe m na-amaghị nke ọ bụla kwekọrọ na mkpa nke azụmaahịa m kacha mma.
E nwere ọtụtụ ndị na-ebido ebido ma ọ bụ ndị nwere ọchụnta ego nwere ọ thatụ na-emeso ezigbo nsogbu enweghị ego na azụmaahịa. Obi dị anyị ụtọ ịgwa gị na anyị dị njikere ịchọta ihe kachasị mma maka nsogbu a. Mmemme USU-Soft maka ịkọ ajụjụ na azụmaahịa nwere ọtụtụ elele ma na-enwu n'oké osimiri nke usoro nyocha.
USU-Soft aza ajụjụ na usoro ahia bụ ihe ị na-arọ nrọ mgbe niile. N'ihi gịnị? Atọ okwu: Ọrụ, Kere, Teknụzụ ọgbara ọhụụ.
Ọfọn, ịkọwapụta ọrụ amamihe niile ị nwere ike ịnụ ma ọ bụrụ na ị wụnye ndekọ anyị na usoro azụmaahịa bụ ihe ịtụnanya. E nwere ụfọdụ n’ime ha.
Njikwa ihe ọ bụla zụrụ yana njikwa ọ bụla nke ngwaahịa a na-enye gị obi ike na arụmọrụ nke azụmahịa gị. Ọ bụrụ na-ịchọrọ, usoro ihe omume nke ịzụ ahịa azụmaahịa na-enye gị ohere ịmepụta akụkọ pụrụ iche nke na-enye nkọwa zuru oke banyere ọnọdụ azụmaahịa gị. N'ụzọ dị otú a ị nwere ike imeziwanye ndekọ ego na azụmaahịa ma mee ka ọ rụọ ọrụ nke ọma.
Ihe nchekwa data ndị ahịa pụrụ iche na-enye gị ohere ịmekọrịta ndị ahịa ozugbo ma gbaa ha ume ịzụrụ ihe. Na mgbakwunye, a na-atụ aro ka ịmepụta otu dị iche iche, nke ga-agụnye ndị ahịa nwere mkpa na mkpa dị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, ọ ga - ekwe omume ịrụ ọrụ dị iche na ndị na - achọ ịme mkpesa ime ike gị niile ịghara inye ha otu ihe kpatara ya. Ma ọ bụ ndị ahịa na-enweghị mmasị maka ndị ọ ga-ekwe omume ịmepụta atụmatụ pụrụ iche iji mee ka ha banye na ngalaba bara uru karị, ya bụ, ndị ahịa oge niile na-azụ ihe mgbe niile. Maka ndị na-azụ ahịa kachasị asọpụrụ ọ ka mma ịnye naanị, ọrụ VIP, n'ihi na otu a ị meriri ntụkwasị obi na ntụkwasị obi ha na-enweghị atụ.
Na ihe puru iche - ezigbo usoro ego, nke ezubere iji dọtakwuo ndị ahịa. Nwere ike ilele etu, mgbe na maka ihe ịzụrụ onye ahịa na-enweta ego. Nwekwara ike iwebata usoro nke ụgwọ ọrụ maka ndị na-ere ahịa ma bulie arụmọrụ ha n'ụzọ dị egwu: ahịa ndị ọzọ, ụgwọ ọnwa - ọ na-arụ ọrụ mgbe niile.
Ihe omuma anyi di mfe na enyi na enyi nke ime gi na ahia bu ihe nlebara anya. Ọ na - enyere gị aka ịghọta ngwa ngwa otu esi arụ ọrụ na mmemme a nke nyocha azụmaahịa, ma mee ka azụmahịa gị bụrụ asọmpi. Atụla egwu na imewe ahụ na-agbanwe agbanwe na ị ga-agwụ ike ngwa ngwa - họrọ ụdị nke interface gị ụtọ na ụdị ma mepụta ọnọdụ ọrụ kachasị mma maka onwe gị na ndị na-ere gị. Ọ bụrụ na ọ dị gị mma ma dị mma maka gị, mgbe ahụ ị na-enwe obi ụtọ ma na-eme ike gị niile na ọrụ. Kedu ihe ọzọ ị ga - eme iji gbakọọ ndị asọmpi gị ma buru azụmahịa gị n'ọkwa ọzọ?
Ọgbara ọhụrụ nke oge a
Anyị na-enye azụmaahịa kachasị mma naanị mmemme kacha mma nke azụmaahịa azụmaahịa emere na teknụzụ dị oke ọnụ iji jikwaa ajụjụ gị na azụmaahịa. Dịka ọmụmaatụ, ka anyị jụọ ajụjụ yiri ka ọ dị mfe dịka ọkwa ndị ahịa. Olee otú anyị si eme ya? E-mail? SMS? Viber? Ha niile, na olu na-akpọ ahịa ahụ. Anyị jisiri ike nweta nsonaazụ dị ịtụnanya ma mepụta onye enyemaka olu nwere ike ịkpọ ndị ahịa ma nye ha ozi dị mkpa. Kemmasi, ọ bụghị ya?
Ekwela oge ọ bụla gbalịsie ike iji aka gị rụọ ọrụ ma nweta ahụmịhe ngosi ngosi anyị na-akwụghị ụgwọ nke nyocha na ngwanrọ azụmaahịa ị nwere ike ibudata na weebụsaịtị anyị. Hụ onwe gị ka etu esi arụ ọrụ nke ọma na azụmaahịa ma rụọ ọrụ azụmaahịa gị dị ka o kwere mee!
Dịka anyị kwurula gị, enwere ọtụtụ nsogbu na onye ọchụnta ego, onye chọrọ imeghe ụlọ ahịa nke ya, ga-eche ihu ma mesoo ya. Enwere ọtụtụ mmejọ nke ị nwere ike ịme, na-anwa ịrụ ọrụ nke ọma ma na-arụpụta. Enwere ọtụtụ ihe ị nwere ike ichefu ime n'ihi nsogbu nke ederede na n'ihi ike ịghọta iwu nke njikwa azụmaahịa. N’ikpeazụ, enwere ọtụtụ atụmatụ nke ị nwere ike ịkwụsị itinye mgbe ị na-achọ ịdọta ndị ahịa, ndị mmekọ, iwepụta akwụkwọ na iji usoro azụmaahịa. Ya mere, dị ka ị na-ahụ, ọ dị oké mkpa ịtụkwasị obi na onye ọkpụkpọ nwere ahụmahụ karịa nke ahịa a ma hapụ ka ọkachamara a na-emeri nsogbu, na-agwa gị ihe ị ga-eme iji zere ihe mgbochi na ọnọdụ ndị a na-apụghị idozi edozi.
Yabụ, USU-Soft na-arụ ọrụ dị ka onye nhazi a na imebi ọnọdụ dị na ụlọ ahịa gị ma ọ bụ ụlọ ahịa gị. Onye nhazi a ga-ebuli usoro nke nnakọta data yana nyocha ya na-esote site na usoro nyocha ya n'onwe ya. Ọ dị mma ma nwee ezi uche iji mejuputa ụdị ọrụ ahụ n'ime ọrụ nke ụlọ ọrụ azụmaahịa gị, n'ihi na uru na enweghị ọghọm bụ ihe na-eme mmemme nke njikwa na njikwa pụrụ iche ma nwee mmasị na ọtụtụ ụlọ ọrụ azụmaahịa na-azụ ngwaahịa, ire, ahịa, mmekọ na akwụkwọ ọgbọ. Arụ ọrụ ahụ adịchaghị mgbagwoju anya - njirimara ndị etinyere ezuola iji mee ka nzukọ gị ka mma. N'otu oge, enwere ike itinyekwu ohere na arịrịọ gị.
Pszụ ahịa na azụmaahịa
Akaụntụ maka mkpọsa azụmaahịa
Za ajụjụ maka ire ngwa ahịa
Akaụntụ maka ire
Akaụntụ maka ire ngwa ahịa
Akaụntụ maka ụlọ ahịa
Akaụntụ na ụlọ ahịa
Akaụntụ na azụmaahịa
Akaụntụ na Ahịa
Usoro ego maka ọrụ na ọrụ
Akaụntụ nke ngwaahịa
Akaụntụ nke ụlọ ahịa
Akaụntụ nke ahia na ahia
Usoro mmemme maka ụlọ ahịa
Ngwa maka ahia
Njikwa maka ụlọ ahịa
Njikwa ahịa ahụ
Mmemme ngụkọta akụrụngwa
Etu esi edobe ihe ahia?
Usoro mmezi ego ngwaahịa
Akaụntụ ahia ahia
Mmemme maka ịdenye ego na ụlọ ahịa
Mmemme maka ụlọ ahịa na-ere ahịa
Ihe omume maka ire ahia
Mmemme maka bazaa
Ihe omume maka ngwongwo a
Mmemme maka ahịa
Mmemme maka ndị na-ere ahịa
Mmemme maka azụmaahịa a
Lọ ahịa akpaaka
Akụrụngwa maka azụmahịa
Nlekọta ụlọ ahịa
Sistem maka ụlọ ahịa
Usoro mmezi ego azụmaahịa
Usoro njikwa ahia